ProCure Proton Therapy Center - Daaweynta Proton ee New Jersey
Fadhiyada Macluumaadka Bilaashka ah
Warbaahinta & Warka
Sidee Proton Therapy u Shaqeysaa
Waxyaabaha la Weydiiyo Proton Therapy FAQs
Madaxa iyo Lugaha Beeraha ah
Burooyinka ku dhow lafdhabarta
Waxaan hadda bixinnaa la tashiyo toos ah iyo booqashooyin dabagal ah. Riix halkan si aad waxbadan uga sii baratid ama aad u barto jadwalka latasho.
Noloshaada Soo Noqo
Ku dawee kansarka Kansarka Proton Therapy ee ProCure
Jawaabtaada Halkaan ka hel
Baro Kala duwanaanshaha ProCure
Xarunta daaweynta proton ee ugu muddada dheer aagga saddex-gobol
Xaruntii ugu horreeysay uguna keliya ee New Jersey oo ay lajirto Pencil Beam Scanning
In ka badan 5,000 oo bukaan ayaa la daweeyay tan iyo 2012
Kooxda daaweynta ugu caansan gobolka ee proton
Qaado SAACAD MUHIIM AH OO NABADGELYADA
Ka arag gudaha xarunta-farshaxanka ee gobolka oo waxbadan ka baro kala duwanaanta ProCure.
DAAWOOYINKA DHAQANKA-DHAQANKA, DIIWAAN-GALINTA
Wax ku ool ah, xakameynaya, oo sax ah, Proton Therapy waa mid ka mid ah qaababka ugu horumarsan ee daaweynta kansarka shucaaca. Iyada oo si sax ah loo qiyaaso, daaweynta proton waxay si toos ah shucaaca u gudbineysaa burada waxayna joojineysaa, yareynta soo-gaadhista shucaaca unugyada caafimaadka qaba iyo yareynta waxyeelooyinka.
MADAXWEYNAHA PROTON MIYAA XAQ U LEH?
Daaweynta 'Proton Therapy' waxay ku habboon tahay daaweynta noocyo badan oo kansar iyo burooyin ah. Saxanka laser-u eg wuxuu ka dhigayaa daaweyn habboon oo loogu talagalay xitaa xaaladaha ugu murugsan, oo ay ku jiraan burooyinka qaab-dhismeedka aan caadiga ahayn, burooyinka carruurta, iyo burooyinka ku yaal u dhow xubnaha muhiimka ah.
Ku faani in ay noqon ProActive
Baadh sheekooyinka xoogga iyo dhiirigalinta bulshadayada.
Buro Maskaxda Meningioma
Ka Qaybgal Kulan Macluumaad
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan daaweynta proton iyo kooxda daryeelka heerkeena adduunka ah. Nagala soo qaybgal casharada macluumaadka ee xarunta-farshaxanka-farshaxanka. La xiriir xarunta si aad u dhigato booskaaga maanta.
FADLAN KA HELI KARTAA
Kooxdayada daryeelka caafimaad ee khubarada ah ma bixiyaan oo keliya sida ugu wanaagsan ee daaweynta kansarka, waxay sidoo kale gaarsiiyaan waxa ugu wanaagsan ee ladnaantaada guud. Dhakhaatiirtayadu waxay tababar ku qaateen qaar ka mid ah xarumaha ugu sharafta badan adduunka, oo ay ku jiraan Harvard Medical School, MD Anderson iyo Jaamacadda Pennsylvania oo leh qibrad balaaran proton therapy. Laga soo bilaabo hogaamiyaheena shucaaca ee cudurka shucaaca ee loo yaqaan 'shucaaca' oncologists ilaa kalkaaliyayaasha cilminaatada iyo shaqaalaha taageerada, kooxdayada oo dhan waxaa ka go'an inay bixiyaan jawi jawi diirran oo soo dhaweyn leh kaasoo xoojiya bogsashadaada.
KU DAWEYNTA KANSARKA QAADKA 'prostate' DHAQANKA BARNAAMIJKA
Iyadoo la adeegsanayo cilmiga sayniska ee daaweynta proton, dhakhaatiirtu si sax ah ayey u bartilmaameedsan karaan burooyinka iyaga oo yareynaya dhaawaca soo gaara unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha jirka. Si ka duwan shucaaca caadiga ah ee raajada oo ay ku jiraan Cyberknife, oo ku tiirsan fotonooyinka si loo gaaro unugyada kansarka, borotoonada ayaa shucaacooda toos ugu shuba burada ka dibna istaaga.
Codso la-talin ku saabsan daaweynta Kansarka Proton Therapy
Si aad wax uga sii ogaato waxyaabaha ku saabsan daaweynta proton ama aad u sameysato ballan ballan ah, fadlan buuxi foomka hoosta qof ayaa kula soo xiriiri doona si uu kaaga jawaabo su'aalahaaga.
Shucaaca *Shucaaca ayaa lagula taliyayShucaac laguma talinayo
Ogaanshaha cudurka *Waxa layga helay kansarWax cudur ah kamaan helin kansar
Sidee ayaad maqli ina daneeyaa?Kooxda u doodistaboorBandhig Bulsho ama DhacdoBukaankii Hore ama Hada JiraSaaxiib ama xubin qoyska ahGudbinta CaymiskaInternetWargeyska XayeysiiskakaleGudbinta DhakhtarkaBogga ProCureradioAqri qodobka joornaalada, joornaalkaWarbaahinta bulshadaXayeysiinta TV-gaTelefishinkaVideo
Faa'iidada Daaweynta Proton Therapy
Halka shucaaca caadiga ah ee shucaaca sii daayo shucaaca laga bilaabo isla marka uu maqaarka gashado illaa dhinaca kale ee burada, proton therapy ayaa shucaaca toos ugu shubaya burada iyada oo aan ka bixin arrimaha ku xeeran caafimaadka.
Wada-hawlgalayaasha Khabiirada ah
ProCure waxay lashaqeeysaa isbitaalada wadanka hogaamiya iyo dhaqamada shucaaca ee cudurka shucaaca si ay bukaanka u soo daweeyaan. Naga xiriirada caafimaad waxaa ka mid ah Memorial Sloan Kettering, Mount Sinai, Montefiore, NYU, iyo Northwell Health.
Soo ogow haddii dawaynta proton ay tahay dawaynta kugu habboon. La xiriir Kooxdayada Daryeel ama weydiiso macluumaad dheeraad ah khadka tooska ah.
Baadhitaanka qalin-qoriga loo yaqaan 'Pencil Beam Scanning Proton Therapy'
Faa'iidooyinka Daawada Proton-ka iyo Radiyaanta caadiga ah
Maxaa loo yaqaan 'Proton Therapy'
Sidee bay u shaqaysaa Proton Therapy?
Dhakhaatiirta iyo Shaqaalaha
Qiimaha iyo Daboolida
Macluumaadka Bukaanka cusub: (877) 967-7628
Rugaha Caafimaadka: (732) 357-2623
Jadwalka Daaweynta: (732) 357-2654
Saacadaha Ganacsiga: 8:00 subaxnimo - 5.00 pm EST
Center 2019 ProCure Proton Therapy Center. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh. Websaydhka 'ProCure', oo ay ku jiraan waxa ku jira iyo barnaamijyadiisa, waxaa loo hayaa ujeeddooyin macluumaad iyo ujeedo waxbarasho oo keliya. Looguma talagelin sidii talo caafimaad, sidoo kale looguma talagalin abuuritaanka dhakhtar bukaan-socod ama xiriir caafimaad. Macluumaadkan ma aha badal u ah la tashiga bixiyahaaga daryeelka caafimaad. Fikradaha iyo fikradaha lagu muujiyey degelkani ma aha kuwo ka tarjumaya kuwa ProCure. ProCure waxaa ka go'an inay bixiso degel marin marin loogu heli karo dhagaystayaasha ugu ballaadhan ee suurtagalka ah. Si gacan looga geysto dadaalkan, aalad turjubaan luqadeed ayaa la heli karaa. ProCure mas'uul kama ah tarjumaadaha Ingiriisiga ah ee loo arko inay khaldan yihiin ama marin habaabin yihiin. Fadlan si toos ah noola soo xiriir ama dhaqtarkaaga si aad ugu diyaariso turjubaan. Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waxaad aqbashaa Shuruudaha Adeegsiga. Fadlan aqri Qoraalkayaga Asturnaanta.
Naqshadeynta websaydhka iyo horumarka by Prager Hal abuur leh
La xiriir kooxdayada daryeelka caafimaadka at (877) 967-7628